Efa ho 150 euro ny fihenam-bidy amin'ity MacBook Air ity miaraka amin'ny M1 | Avy amin'ny mac aho
Efa ho 150 euro ny fihenam-bidy amin'ity MacBook Air miaraka amin'ny M1 ity
Ny fahatongavan'ireo Mac vaovao miaraka amina processeur M1 dia manamboatra midina tanteraka ny vidin'ireto fitaovana ireto Ary raha mahita tolotra tsara toa ilay hizaranay ato amin'ity lahatsoratra ity ianao, dia mety ho be ny tahiry.
Ary miresaka isika saika 150 € ny fihenam-bidy amin'ny MacBook Air miaraka amina processeur M1 natomboka tamin'ny Novambra 2020 lasa teo. Raha ny lojika, ity tolotra ity dia tsy azo jerena afa-tsy amin'ny tranokala toa an'i Amazon.
Raha iray amin'ireo mpampiasa misalasala mividy Mac vaovao miaraka amina processeur M1 ianao dia izao angamba no mety ho anao. Ireo solosaina vaovao ireo dia maneho fisondrotana lehibe eo amin'ny lafiny herinaratra, fiasa ary ambonin'izany rehetra izany raha oharina amin'ireo solosaina Apple izay nanampy processeur Intel.
Ity Air vaovao ity dia manampy ny chip voalohany natao manokana ho an'ny Mac avy amin'i Apple. Apple's M1 dia rafitra amin'ny chip (SoC) izay manangona transistors 16.000 miliara ary mampiditra ny CPU, GPU, Neural Engine, I / O ary maro hafa amin'ny endrika kely. Miaraka amin'ny fampisehoana ambony, ny teknolojia avo lenta ary ny fahombiazana avo indrindra amin'ny indostria, ny M1 dia tsy dingana vaovao ho an'ny Mac fotsiny.
Ny vidiny ho an'ireo mpampiasa Amazon Prime miaraka amina fanaterana trano dia 985,99 euro fotsiny. Tsy isalasalana fa io no vidiny tsara indrindra azonao ankehitriny amin'ny fividianana MacBook Air miaraka amina processeur M1. Ity MacBook Air ity no maodely 13 santimetatra miaraka amin'ny RAM 8 GB ary amin'ity tranga ity dia ny maodely 256 GB SSD miloko gtoerana ris.
Ho fanampin'izay, omen'ny Amazon lojika ny antoka, noho izany dia miatrika ny iray amin'ireo safidy tsara indrindra hividianana ireo fitaovana ireo izahay anio, na amin'ny vidiny, na amin'ny tombony, ary koa amin'ny fiantohana fiantohana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Solosaina Mac » MacBook Air » Efa ho 150 euro ny fihenam-bidy amin'ity MacBook Air miaraka amin'ny M1 ity
Fotoana fanaterana ny 9-16 Jona ao amin'ny iMac
Affinity Designer misy mandritra ny fotoana voafetra amin'ny antsasaky ny vidiny